“Suldaan Wabar Waxaan Leeyahay Waxba Ayaanay Dhulka Idinka Oolin” | Saxil News Network
“Suldaan Wabar Waxaan Leeyahay Waxba Ayaanay Dhulka Idinka Oolin”
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Maxamed Jaamac Abgaal, ayaa sheegay in ay tallaabo ku haboon ka qaadi doonaan suldaanka fidmada wada ee dhuumaalaysiga ku jira iyo cida kula socota fikirkiisaba.
Waxaanu tilmaamay in aanay cidna u dabo fadhiisanaynin kana aqbali doonin in suldaan Wabar nabad geliyo darro ka abuuro gobolka Awdal, isla markaana ay xukuumad ahaan waajibkooda kaga haboon ku waajihi doonaan Suldaanka falaagoobay.
“Carruurta ay hooya-dood u soo shaqaynaysay 18-saacdood, in labada saacdood ee hooyadood nasan lahayd ee ay seexan lahayd in Suldaan Wabar xabad la dul yimaado mid aanu aqbalayno maaha.Suldaan Wabar wuu ina Khaayimay,dadkii soo doortay ayuu khaayimay, Somaliland buu khaayimay, waxaanay xaaladdiisu maraysaa inuu dadkii maasaakiinta ahaa soo weeraro, waanu ka celinaynaa,mana aqbalayno. Inta dibada joogta ee xaaladaha caynkaas ah la aaminsan waxaan leeyahay waxba yaan dhulka idinka oolin, wey soo dhaaftay cay-cay” ayuu yidhi Wasiir Abgaal oo warbaahinta la hadlay.
Waxaanu weerarkaasi ku eedeeyey in uu ka danbeeyey suldaanka fallaagoobay ee suldaan Abubakar Cilmi Waber oo muddooyinkii danbe ku jiray duurka.Isaga oo sida oo kalena hanjabaado adag u diray Suldaan Waber, waxaana uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin in reer Boorama laga baa’biiyo nabada ay ku naa-loo-nayaan.
Dhinaca kale wasiirka Boosuhu waxa uu ka ahdlay falkii dhawaan xili habeenimo ah lagu weeraray saldhiga booliska ee Boorama. Waxaanu yidhi “Waxaan ka tacsiyadaynayaa xabbadii habeen hore labadii iyagoo soo shaqaystay oo soo daalay Suldaan Waber la dul yimid, aad iyo aad anigoo uga xun ayaan runtii ka tacsiyadaynaya,waxaa muddo ku siman ilaa bil iyo badh,waxaa Suldaan Wabar ka soo yeedhayay hadalo uu ku sheegayay inuu reer Awdal ugu raadinayo xaq ka maqan, in uu xoraynayo iyo inuu Somaliland ka soo horjeedo, nasiib darro iyadoo aynu ogayn in marka horeba waxaasi ahaa khiyaali.
Waxaanay ku soo gabo gabowday, iyadoo 350-nin oo sheikh iyo Shariif-ba leh oo ay hogaaminayaan hogaanka dhaqanka iyo ugaaska guud ee Awdal ay shir ku leeyihiin degmada Geb ee Awdal, iyadoo la filayo in guud ahaan Somaliland, gaar ahaana Awdal uu anfici doono waxa ka soo baxa shirka Geb, inuu Suldaan Wabar kaligii xabbad u la waydaarto carruurtoodii raggaas dantooda ka shiraya”Ayuu yidhi wasiir Abgaal.
Sidoo kale Wasiir Abgaal ayaa ugu baaqay dadka qurba-jooga ah inay ka waantoobaan hadalada naxliga xambaarsan, waxanau yidhi “Waxa kale oo aan u sheegayaa dadka dhawrka tirada yar ee isirka qolo isku mid ka nahay ee jooga Kanada iyo Ameerika ee ku sheekeeya hebelada la jooga Somaliland ee xilka haya Isaaqay u adeegaan ee leh waxay Kabaha u qaadaan Madaxweyne Siilaanyo ku sheekeeya , waxaan leeyahay taariikhada Somaalidu meel kasta oo ay joogto dhaqankaasi ma lihin meel la igu gumaystay Somaali kuma arag, Somaalina ima hayso meel kasta oo ay ku nooshahay. Somaliland-na warkeeda daa, igana waxaan leeyahay intii aynu ifka wada-joognay qolo ahaan maynaan arag sidaas haddan Uurka Hooyadiin la idinku soo gumaysan-jirin maan arag meel aanu dadka ku soo gumaysano iyo meel la igu soo gumaystay, bulshada aanu dhulkan la leenahayna nooma shaqeeyeen umana shaqayno kabo uma qaadno noomana qaadaan, wax baanu wadda-leenahay waanan wada shaqaysanaa”.
Wasiir Abgaal waxa kale oo uu fariin adag u diray Golaha deegaanka Boorama, waxaanu yidhi “Golaha deegaanka Boorama loo doortay ilaa maalintii xilkaa loo dhiibay waxa ka muuqda is qab-qabsi, nasiib-daro xaalada halkaas maraysa ee aanu amnigii Boorama ka fikirayno iyagii xilku ka saarnaa ee lagu doortay codka dadka meelin walba inay noola yimaadaan Mooshin-baanu wadnaa ee noo gurmada lay idinkama aqbalayo. Mooshina ma jirayo, doorasho la idin qabanayaana ma jirayso waad iska tagaysaan.”
Wasiirku waxa uu intaas ku daray, “Waxaan leehay Inamada nasiibku nawada keenay ee masuuliyada qaranka meel aanu kaga wada jirno ee reer Awdal, waxaan kula talinayaa intii xaalada Wabar bilaabantay erayada aad kula dhex-wareegaysaan ee aad leedihiin waa Jibriil Yoonis waa reer gaar ah idinka socon mayso, waxaana la fiican oo ila quman oo aan idinkula talinayaa inaad meel halkaas ka saraysa aad ka fikirtaan, ma jirto shaandho ina kala shaandhaynaysa. Dhibta Jibriil Yoonis gaadhaa wey ina wada-gaadhaysaa reer hebelada kale ee reer Awdal , waxay gaadhaysaa Somaliland waxaanan idin leeyahay tallo kale keena taasi idinka shaqayn maysee” ayuu yidhi wasiirku.